Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud (Siilanyo) oo soo saarey Warsaxaafadeed ku saabsan doorashada madaxtinimada Jamhuuriyadda Somaliland ee lafilaayo in ay dhacdo 13th November 2017, taas oo ay ku jiraan amaro culusi. | Somaliland Voice
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud (Siilanyo) oo soo saarey Warsaxaafadeed ku saabsan doorashada madaxtinimada Jamhuuriyadda Somaliland ee lafilaayo in ay dhacdo 13th November 2017, taas oo ay ku jiraan amaro culusi.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Axmed Maxamed Maxamuud (Silaanyo),waxa uu soo saaray wareegto madaxweyne oo summadeedu tahay JSL/P/WM/-50/092017. Wareegtadu waxa uu ku dhaqan geliyey saddexdan arrimood:
Reebbanaanta U Adeegsiga Hantida Qaranka Ololaha Xisbiyada
Isticmaalka Warbaahinta Dawladda iyo Fagaarayaasha Wakhtiga Ololaha Doorashada
Gacan Siin Komishanka Doorashooyinka Qaranka
Ujeeddo: Wareegto Madaxweyne; Reebbanaanta U Adeegsiga Hantida Qaranka Ololaha Xisbiyada
Mudanayaal, Sida aynu wada ognahay, waxa dalka ku soo fool leh doorashada Madaxtooyada oo u qorshaysan 13-ka November, 2017-ka. Sidaa darteed, waxa reebban in hantida qaranka nooc kasta oo ay tahay ba in loo adeegsado ololaha doorashada ee axsaabta qaranku ay ku loolamayaan.
Ujeeddo: Wareegto Madaxweyne; Isticmaalka Warbaahinta Dawladda iyo Fagaarayaasha Wakhtiga Ololaha Doorashada
Ku: Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta iyo Wacyigelinta Hargeysa
Mudanayaal, Sida aynu wada ognahay, waxa dalka ku soo fool leh Doorashada Madaxtooyada oo ku muddaysan 13-ka November, 2017-ka. Sidaa darteed, aniga oo ka duulaya Qodobka 26aad ee Xeer Lr. 20-2/2005, iyo Xeerka Hab-dhaqanka ee Xisbiyada oo faraya in Xisbiyada Qaranka u sinnaadaan muddada ololaha doorashada isticmaalka warbaahinta dawladda iyo fagaarayaasha khayriyadda.
Ujeeddo: Wareegto Madaxweyne; Gacan Siin Komishanka Doorashooyinka Qaranka
Mudanayaal, Sida aynu wada ognahay, waxa dalka ku soo fool leh Doorashada Madaxtooyada oo u qorshayan 13-ka November, 2017-ka. Sidaa darteed, idinka oo gudanaya waajibaadka iyo masuuliyadda aad qaranka u haysaan, waxa la idin farayaa in aad ka gacan siisaan Komishanka Dooraashooyinka Qaranka gudashada waajibaadka qaranka ee ku aaddan qabsoomidda doorashada Madaxtooyada, idinka oo raacaya shuruucda iyo xeerarka Dalka u dejisan.
Af-hayeenka Madaxtooyada JS